AbaTyeleli beeNdwendwe zeeNdwendwe zeCape Valley
Eunited States California
Isikhokelo soBatyeleli kwiNxweme yeSizwe sokuPhumela kweNdwendwe
Nantsi indlela yokutyelela
I-Death Valley National Park yenye yezona ndawo zihamba phambili kakhulu kunazo zonke zehlabathi-eziphantsi kakhulu kunye neyona ndawo efanelekileyo kwi-United States yokukhangela inkwenkwezi. Ngemvula enqabileyo, yindawo engabonakaliyo, igcwele imida ye-geological, iindunduma ezincinci zentlabathi kunye namakhaya athile ahlala kuyo. Unokwazi ukuma emngceleni we-volcano ephela, funda ubungqina bamatye ajikeleza ngaphandle kokungenelela komntu, ume 282 ft (86 m) ngaphantsi kwinqanaba lolwandle okanye u tyelele iNkundla yeGolofu (okanye insimu yakhe yeganga), yonke imihla ixesha, ke ujike ngobusuku kwihotele enhle, ekhululekile emva kwesidlo esihle kakhulu.
I-Park Valley National Park: Intshayelelo
Badwater e Death Valley. UDavid Toussaint / Getty Izithombe
Mhlawumbi uye wakuva ngokufa kweNtlambo yokuFafa, kodwa ungazi ukuba uninzi malunga nalo. Qalisa ukucwangcisa uhambo lwakho ngokufunda esi sikhokelo sokuqala . Kuya kukunceda ukuba ufumane isizathu sokuba (kwaye ukuba) kufuneka uhambe, njani ukuhamba emva kokuba ufike - kwaye kubaluleke kakhulu, khangela iingcebiso ezifanelekileyo esizihlanganisile ngexesha lokutyelela, sibuyele ngo-1999.
Ngamanye amaxesha omnyaka, i-Death Valley ishushu kakhulu kuninzi lwethu. Enyanisweni, ibambe irekhodi yehlabathi ngolu bushushu obuphezulu obhaliswe emhlabeni. Sebenzisa le mozulu kunye nesimo sezulu ukuze ufumane ukuba zeziphi iimeko ezinokuthi uzenze xa u tyelela.
Ukuze ube nococeko ngendlela enokwenzeka xa uhlala kule ndawo eshushu, kwindawo eyomileyo, fumana iingcebiso malunga nezinto ozenzileyo ngaphambi kokuya entlango .
Indlela yokufikelela kwiNxweme yeSizwe sokuPhulwa kweNdwendwe
Endleleni eya kwisilambo sokufa. I-Corbis ngokusebenzisa i-Getty Images / Getty Izithombe
Ukuba awuyazi apho i-Death Valley ikhona-okanye unayo ingcamango engacacanga yendawo yayo, ngoku ixesha lokufumana apho i-Death Valley ikhona khona , kutheni impendulo yombuzo othi "Kuphi i-Death Valley?" Ngamanye amaxesha ulahlekile ngokungafi, ukuba kude kangakanani na kwezinye iindawo kunye nendlela yokufika khona.
I-Las Vegas yiyona dolophu enkulu kunazo zonke kwiSixeko sokufa. Ukuba uhambo lwakho luqala ukusuka apho, khangela iindlela ezahlukahlukeneyo zokufumana ukusuka eLas Vegas ukuya kuLwandle lweNtaba .
Kuphi ukuhlala kwiPhepha yeSizwe sokuFafa
Ukubhukuda kwiFurnace Creek Inn. URobert Alexander / Getty Izithombe
Ukuba uhlala ubusuku bonke kwi-Death Valley National Park, kukulungele ukucwangcisa phambili ukuba uqiniseke ukuba kukho umbhede elinde wena. Ininzi iindwendwe zihlala kwi-Oasis e-Death Valley Resort (eyayisakuba yi-Furnace Creek Resort) okanye i- Stovepipe Wells kwaye kukho namagumbi ambalwa atholakala kwi- Panamint Springs .
Ukuba uthanda ukuya ekampini uza kufumana inketho kuloo ndlela ekhompyutheni ye - Death Valley .
Izinto Ezozenzayo kwi-Death Valley National Park
Iindunduma zeSanquite eSand Valley Death. © 2015 Betsy Malloy Photography. Se tyenziswa yi Mvume.
Kuninzi ukukwenza kwi-Death Valley kwaye uza kufumana ezinye zeendawo ezintle kakhulu kwihotele yesithombe apha ngezantsi, kodwa ukuba ixesha lakho lilinganiselwe, sithatha iindwendwe eziphezulu ze-Death Valley , ezo zininzi abantu kakhulu.
Ukuba ufuna ukuthatha ityelelo - okanye wenze eyakho. Okanye ukuba uthe tyelela i-Death Valley njengehambo laseLas Vegas, sineengcamango zeTreat Valley National Park .
Yaye ukuba yonke into enayo ngeveki, sebenzisa le khowudi kunye nokuhamba okuya kuhamba kwaye kuya kucetywa ngaphandle kwexesha.
I-Death Valley Photo Tour
Iintyatyambo zasendle e-Death Valley. Christine Warner Hawks / Flickr / CC BY 2.0
Ubuhle be-Valley Valley kunye neepatheni zokukhanya ziyi-draw enkulu kubapostile kwaye asikho. Iholide ye-Death Valley National Park ifaka iincwadana ezingaphezu kwezingama-20, eziqokelelelwe ngokuphindaphindiweyo. Cofa ngaphaya kwayo kwaye ngokuqinisekileyo uyakwazi ukubona umntu onqabile ngobukhulu bendunduma yesanti.
Idolophu ephilileyo yaseRhyolite, i-Nevada iyinto enhle ye-photogenic, nayo. Jonga .
Iimfazwe zeNkanyezi e-Death Valley
I-R2D2's Canyon e-Valley Valley. © 2015 Betsy Malloy Photography. Se tyenziswa yi Mvume.
Uyakhumbula iindawo zasentlango zaseTatooine kwiifilimu ze- Star Wars ? Uninzi lwazo iziqendu ezidumileyo zafakwe kwi-Death Valley kwaye sazi ukuba ziphi na ezo.
Isikhokelo sokuHlala saseYosemite
I-Laguna Beach kunye neNxweme yase-Orange County yeeGay Guide
I-Hearst Castle Iingcebiso Iingcebiso
I-Humboldt County yeNude Beach Guide
Uhambo oluya eGetaway ukuya eCayucos, eCalifornia
IHlf Bay Bay
Oko Kufana NgoNovemba e-Amsterdam
13 Iziqithi eziPhambili kunye neendawo zokuvakashela eGujarat
Yintoni enokuyenza xa i-Airline iLawula umthwalo wakho
Ukukhokelwa kunye nohambo oluzimeleyo: Yiyiphi eyona nto ihamba phambili kuwe?
Ukutyelela i-Acoma yasePueblo yasendulo
Kucinga ukuba Ziziphi iiNdawo zamazwe ngamazwe eziPhambili kwiThumo lokuBonga?
KwiSixeko saseLake Havasu
I-Grosvenor House Hotel I-Grover's Tea
Eyona mihla yamaTsha eNorth Jersey
IFama eFleleleyo kwiSitishi zokutyela eVermont
Indlela Yokulungiselela NgoSeptemba Isimo sezulu ePoland
Ngamaxesha amaninzi Ngaba iiNkupho ziye zapha iCape Cod?
Ihlathi lePaa Ridge yiFama yeKhisimusi ephezulu yaseSt. Louis
Izinto ezi-5 zokuzenza kwiiJackson zase-Queens, Queens